တော်ပါတယ် | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Shefleru ချုံအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ? ငါသည်သင်တို့ကိုအင်တာနက်ကနေမဖြစ်ပြောပြမည်! ဒါဟာ 1 တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ကိုလေပေါ်မှာပ, သင့် rastihu fertilize ရန်အချိန်ဖြစ်သင့်ကြောင်း, ဒါကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနည်းရေလောင်းရှိသင့်ပါတယ် ...
ငါသစ်အယ်သီးခဲ့တဲ့ potted သစ်အယ်သီးစောင့်ရှောက်သိကောင်းစရာများ, အင်တာနက်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းမရှိဘဲပြောပြ, rastt ကောင်းစွာ, နွေရာသီမှာရေလောင်းချစ်သောသူကဆောင်းရာသီတွင်အခွံမာသီးကိုသင်္ဂြိုဟ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးအတွက်အရွက်ကိုရှင်းလင်းရေး ...
Kalanchoe များအတွက်လိုအပ်သောမြေဆီလွှာ၏အဘယ်အရာအမျိုးအစားဖြစ်သနည်း ကြားနေသို့မဟုတ်အနည်းငယ်အက်ဆစ်အဘို့သိမ်းယူသောမြေဆီလွှာ Kalanchoe (pH ကို 5,5-6,5) ။ အပင်အရည်ရွှမ်း၏ပုံမှန်အတိုင်းရောနှောအတွက်ကောင်းစွာမပေါက်ပါဘူး။ လူငယ်တို့အပင်4အစိတ်အပိုင်းများအရောအနှောသို့အစားထိုးနေကြပါတယ် ...
သင့်လျော်သောစောင့်ရှောက်မှု murayey ကဘာလဲ။ အဘယ်ကြောင့်2နှစ်အရွယ်နည်းနည်း murayi အတွက် unblown ပန်းပွင့်လဲကြ?
သင့်လျော်သောစောင့်ရှောက်မှု murayey ကဘာလဲ။ အဘယ်ကြောင့်2နှစ်အရွယ်နည်းနည်း murayi အတွက် unblown ပန်းပွင့်လဲကြ? ငါ murayku နွေဦးဖူးအငုံထွက်ဝယ်လိုက်တယ်။ များလွန်းတစ်နေရာရာမှာ 10 စင်တီမီတာ။ အဆိုပါစီရင်ချက်ခြောဥယျာဉ်မှူးပွင်-မဟုတ်ပေးရဖို့ပဲ။ ...
သစ်ခွကိုစိုဖို့ဘယ်လို? ငါကအဆက်မပြတ်ဗန်းထဲမှာရေ refill နှင့်သူမရှိလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ဖွစျကွောငျးကိုသေချာစေရန်လိုအပ်သောကြောင်းကြားပြောလေ၏, ဒါကြောင့်ငါလုပ်နေတာပေါ့။ ဤတွင်ပြန်သစ်ခွမှဘာလုပ်ရမှန်းရဲ့ ...
ကမိုးလုံလေလုံအပင်များအတွက်ခရမ်းလွန်မီးခွက်သုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိငါ့ကိုပြောပါ? သငျသညျအခိုးအငွေ့ပြန်လည်နာလန်ထူယူနစ်တွေအကြောင်းလေ့လာသင်ယူ, သင် HPS ထိုကဲ့သို့သောခရမ်းချဉ်သီး, ငရုတ်ကောင်း, ခရမ်းချဉ်သီးအဖြစ်အပင်၏ဖြည့်စွက်အလင်းရောင်များအတွက် lamps ကိုသုံးနိုင်သည်ရှိမရှိကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခရမ်းလွန်၏အသုံးပြုမှုကို ...
အဆိုပါ blossoming phalaenopsis ကျွေးမွေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ပန်းပွင့် phalaenopsis အစာကျွေးဖို့ဘယ်လို? Phalaenopsis - အမြဲတမ်းကြီးထွားနေသောသစ်ခွများ၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါးပွင့်လာသောသူတို့၏မျိုးစိတ်နှင့် hybrids များသည်အစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သောဂရုစိုက်မှုဖြင့် phalaenopsis သည်ကြာရှည်စွာအလွန်အမင်းပွင့်လန်းသည်။
သငျသညျခွောကျသှေ့ထန်းရွက်အကြံပေးချက်များရှိပါက, ဘာလုပ်ဖို့ကျွန်မကိုပြောပြပါ ?? အထူးဓာတ်မြေသြဇာရှိပါသလော
သငျသညျခွောကျသှေ့ထန်းရွက်အကြံပေးချက်များရှိပါက, ဘာလုပ်ဖို့ကျွန်မကိုပြောပြပါ ?? အထူးဓာတ်မြေသြဇာရှိပါသလော ဤတွင်ကျွန်မရေလောင်းအကြောင်းကိုသိကြပေမယ့်စွန်ပလွံပင်မှာ chetvrty စာရွက်ပုံပေါ်သည်အလွန်ပထမဦးဆုံးအခြောက်မှစတင်သည်ပါဘူး။ ရန်ရှိသည် ...
အရည်ရွှမ်းအစားထိုးကုသမှဘယ်လိုနေသလဲ? ငါအစပြုသူများအတွက်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ချင်ပါတယ်။ အိုးရွေးချယ်ခြင်း။ ဒါဟာသင်သွား, ရှားစောင်းပင်အမျိုးအစားများ၏အမြစ်စနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးအိုး၏ညာဘက်အရွယ်အစားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ် ...
အဆိုပါအန္တရာယ် dieffenbachia? အဘယ်ကြောင့်အဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်သနည်း
အဆိုပါအန္တရာယ် dieffenbachia? အဘယ်ကြောင့်အဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်သနည်း လက်အိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ -kruto! တစ်ဦးက esch အသက်ရှူကိရိယာ! တစ်ဦးက esch အဘိဓါန်! ငါကအထီးခွန်အားမရှိခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့်ကြောင်များအတွက်အလွန်အန္တရာယ်များကြောင်းကိုဖတ်ပါ။ ငါ့အကြောင် ...
တောင်းထဲ၌ပန်းပွင့်ရေလောင်းခံရသင့်သလဲ သိပ်မှန်ပါသည်သေချာ, သေချာ-ပန်းပွင့်ကိုသူတို့မှရေကိုသောက်။ ထိုသို့ဖွင့်ထိပ်ဆုံးရန်လိုအပ်ပါသည်။ သွန်းလောင်းရန်သေချာစေပါ !!! Tatiana, ကောင်းသောညနပေိုငျး! ဤသည်အစိမ်းရောင်ပန်းရေမြှုပ်အပြီးအပိုင်ရေနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားရမည် ... !!
ဒီ ficus အကြောင်းရင်းလိမ်အရွက်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ရောဂါပပျောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဂရုတစိုက်အစက်အပြောက်နှင့်ကြမ်းတမ်းသောအဘို့အလိမ်အရွက်ဆန်းစစ်ရပါမည်။ သူတို့ဖြစ်ကြသည်ဆိုပါကသင့်ရဲ့ ficus ကြောင်းဖွယ်ရှိသည် ...
ကြောင်း takoo ရှားစောင်းပင်
ဒီလိုစိမ်းလန်းသောရှားစောင်းပင်တစ်ပင် .... ကျောရိုးများနှင့်အတူ Cacti သည်အရည်ရွှမ်းသောအပင်များဖြစ်ပြီးအသားများအားလုံးကိုအမွေးအမွေးများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ cacti အားလုံးနီးပါးသည်သာမန်အရွက်များမရှိကြပါ။ အများစုမှာဆူးများရှိသည်။ သူတို့က ...
အပင်များ၏အသီးအရွက်များကာလကဘာလဲ? ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကာလ, တက်ကြွ rosta.Etot မေးခွန်းတစ်ခုကိုဤနေရာတွင်ပြီးသား http://otvet.mail.ru/question/17180703 •အကာလဖြစ်ခဲ့သည် (လကျတငျကနေ။ Vegetatio ပြန်လည်နာလန်ထူ, အသီးအရွက်များ) တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရာအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုယခုနှစ်ကာလအတွင်း ...
ကပိုက်ဆံသစ်ပင်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်မလား? အလွန်လေးလံသောအကိုင်း ... ချ sloping ... နှင့်ကိုချိုးဖျက် ...
ကပိုက်ဆံသစ်ပင်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်မလား? အလွန်လေးလံသောအကိုင်း ... ချ sloping ... နှင့်ကိုချိုးဖျက် ... Zhstko! ငါ့လက်ကိုထိုကဲ့သို့သောအစွန်းရောက်ဆံပင်ညှပ်ဖို့မထပါဘူး။ ၏သင်တန်းကိုသင်လို့ရတယ်။ ဒါဟာသင်သည်အဘယ်သို့လိမ့်မည် mow, တကဖြစ်ပါတယ် ...
ဘယ်အချိန်မှာငယ်ရွယ်စက်ရုံ Crassula Crassula prischipnut သင့်သလဲ
ဘယ်အချိန်မှာငယ်ရွယ်စက်ရုံ Crassula Crassula prischipnut သင့်သလဲ လာသောအခါငယ်နှစ်ရွက်ထွက်ငါ pinch ။ ငါသည်ငါ့ stam ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျနော်တို့ prischipok မပါဘဲ rastt ကရရှိပါသည် ... ထိုအဘယ်သို့သောအ ...
အဘယ်ကြောင့်အရွက်အဝါရောင် kalanchoe Calandiva လှည့်သလဲ? အဘယ်အရာကိုဒီစက်ရုံဂရုမစိုက်လိုအပ်ပါတယ်?
အဘယ်ကြောင့်အရွက်အဝါရောင် kalanchoe Calandiva လှည့်သလဲ? အဘယ်အရာကိုဒီစက်ရုံဂရုမစိုက်လိုအပ်ပါတယ်? အရွက်သဘာဝကျကျအဝါရောင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပယ်ကျကြအဝါရောင်ကိုဖွင့်နှင့်အချိန်နှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူအပင်နိမ့်အရွက်ကိုချွတ်ကျလိမ့်မည်။ ဘယ်အချိန်မှာဒီ ...
ဆေးခြောက်၏စိုက်ပျိုးမှုများအတွက်ဆီမီးခွက်သုံးစွဲဖို့ပိုကောင်းဘယ်ဟာပါလဲ? အက်ဒီဆင်တီထွင်မီးသီးများအတွက်နောက်ဆက်တွဲအလင်းရောင်ပဲသူတို့လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုပမာဏ၏ leash 3% ဖြုန်းအလင်းရောင်ကတော့မှ fit မကြွင်းသောအရာအပူဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကပိုပြီးလက်ခံနိုင်ဖွယ် option ကိုဆီမီးခွက် ...
အဘယ်အရာကိုမျိုးပွားသော“ MORNING GLORY” Ipomoea (Ipomoea Violacea)၊ - မိသားစု: Convolvulaceae; - ယေဘုယျအမည်: Ipomoea; - အမြင်: violacea (Morning Glory) - ဇာစ်မြစ် - မက္ကဆီကိုတောင်ပိုင်း၊ ဂွာတီမာလာ၊ အနောက်အင်ဒီးစ်နှင့်တောင်ပိုင်းအပူပိုင်းဒေသတောင်တန်းများ။
မိုးလုံလေလုံအပင်များအတွက်အကောင်းဆုံးတော်ပါတယ်ကဘာလဲမြေယာပါသလဲ အခုတော့မြေနှင့်အမျိုးမျိုးသောအပင်အရောအနှောအမျိုးမျိုးရောင်းစတိုးဆိုင်၌တည်၏။ ထုပ်ပိုးအပေါ် anatatsii Read, အရာအားလုံးညွှန်ကြားထားသည်။ အဲဒီမှာသင်အကြိုက်ဆုံးအခန်း ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,274 စက္ကန့်ကျော် Generate ။